किन सरकारमा गएन संघीय समाजबादी फोरम नेपाल ? - InHeadline
किन सरकारमा गएन संघीय समाजबादी फोरम नेपाल ?
By R. sharma on Mar 19,2018 - 09:48
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा संघीय समाजबादी फोरम पनि सरकारमा सहभागि हुने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर फोरम सरकारमा सहभागि हुने सोही पार्टीले गरेको निर्णय भन्दै बहिर आएअन्तत् फोरम सरकारमा भने सामेल भएन ।
किन गएन सरकारमा फोरम
फोरमले संविधान संशोधनका विषयमा बाम गठवन्धनसँग लिखित प्रतिवद्धताको पर्खाइमा थियो । तर बाम गठवन्नधन भने संविधान संशोधनको विषयमा लिखित सहमती गर्न मंजुर नहुदा फोरम सरकारमा जाने बातवरण सृजना नभएको फोरमले स्षष्ट परेको छ ।
फोरमका लागि दुईवटा मन्त्रालय छुट्याएर राखे पनि सविधान संशोधन लगायत मधेसका अन्य मुद्दामा भने वाम गठबन्धन र फोरमबीच अहिलेसम्म लिखित सहमति भने भएको छैन । आइबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सविधान संशोधनका विषयमा हस्ताक्षर नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारमा आऊ भनेर मात्र हुँदैन, हाम्रा केही शर्तहरू छन् त्यसबारे पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ अनि मात्र हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ । ’ सरकारमा सहभागिताका लागि वाम गठबन्धन र फोरमबीच पटक पटक वार्ता भइसकेको छ । वार्तामा गठबन्धनका नेताले सविधान संशोधनमा प्रतिबद्धता जनाए पनि लिखित सहमति भने भएको छैन । दुवै पक्षवीच सविधान संशोधनका गृहकार्य गर्न एउटा कार्यदल बनाउने मौखिक सहमति भने भएको छ । मौखिक सहमतिलाई फोरमले लिखित रूपमा चाहेको छ ।
फोरम पदाधिकारी बैठकमा मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । फोरमले पाउने दुई मन्त्रालयका लागि थुप्रै नेताले दाबी गरेका छन् । फोरमका लागि छुट्टयाइएको सहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको नाम आए पनि पार्टीभित्र सहमति बन्न सकेको छैन ।
मन्त्रीका लागि उपाध्यक्ष रेणु यादव, महासचिव रामसहाय यादव, केन्द्रीय सदस्य इस्तियाक राइन, प्रदीप यादव, हरिनारायण रौनियार लगायतले दाबी गर्नुभएको छ ।
मन्त्रीमा राजेन्द्र श्रेष्ठको नाम आएपछि मधेसमा त्यसको विरोध सुरु भएको छ । तराई मधेसमा आएको मतले सहअध्यक्ष श्रेष्ठ समानुपातिक सांसद बन्नुभएको भन्दै उहाँको विरोध भएको हो । अध्यक्ष र सहअध्यक्ष दुवै जना सरकारमा जान नहुने तर्क पनि नेताहरूको छ ।
ट्याग - फोरम बाम गठवन्धन